Somaliland: Xasan Daahir Aweys Oo Kooxda Al-saadicuun- Bil-Xaq Ku Tilmaamay Kuwo Halis Ku Ah Islaamka Faahfaahina Ka Bixiyey Aqoonta Uu U Leeyahay - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Xasan Daahir Aweys Oo Kooxda Al-saadicuun- Bil-Xaq Ku Tilmaamay Kuwo...
Sheekh Xasan Daahir Aweys oo xabsi guri ugu jira Maamulka Muqdisho ee dalkaasi Soomaaliya ayaa fariin maqal iyo muuqaal ah oo uu soo duubay laguna faafiyey baraha bulshada kaga hadlay Koox diimeedka Al-Saadicuun-Bil-Xaq.
Wadaadkan xag-jirka ah ee reer Muqdisho ayaa sheegay in kooxdan ay tahay koox aaminsan fekerka takfiiriga ah ee lagu gaaleysiiyo muslimiinta ayna si qaldan diinta ugu faafinayaan Shacabka Soomaaliyeed.
Sheekh Xasan ayaa tilmaamay in culimada Somaaliyeed ay ka gaabiyeen ka hadalka Kooxdan oo uu ku tilmaamay kuwa aan xaq ku socon oo si qaloocan dadka ugu fasiraya diinta Islaamka.
Waxaa uu intaa ku daray Urur Diimeedka Al-Saadicuun-Bil-Xaq muddo 40 sano ah la soo qarinayay, uuna aqoon fiican u leeyahay cida aasaastay iyo waxa ay aaminsan yihiin, waxuuna ka dalbaday Umadda Soomaaliyeed in ay is hortaagaan kooxdan.
“Kooxdan waxay soo jireen qarniyo hore, dhibaatooyina waxay ku hayeen saxaabadii Nabi Maxamed naxariis iyo nabad galiyo korkiisa ha’ahaatee” ayuu yidhi Shiikh Xasan Daahir oo dhinaca kale ku baaqay in shaqsiyaadka ka tirsan kooxdan aan la dilin, la xidhin dhibaatooyin kalena loo geysanin, wuxuuna xusay in sida ugu fiican ee looga hortegi karto ay tahay inay culimada Soomaaliyeed la doodaan.
Xasan Daahir Aways oo arrinta ururkan cusub ka hadlayaa waxa uu yidhi: “Markii hore waxa abaabulay nin Azhari ahaa oo la odhan jiray Cali Ismaaciil oo nin walaalkii ah oo la yidhaa Cabdifataax Ismaaciil oo isagu ahaa qoladii Sayid Qudub lala dilay ahaa ayuu la dhashay markaa waxa uu ku jiray qoladaasi xabsiga lagu cadaabay. Ninkaasi ayaa fikradda kooxdan lahaabaa la yidhaahdaa. Isaga ayaa fikraddan aasaasay laakiin markii dambe wuu ka noqday fikraddan. Markii uu ka noqday wiilkan oo la xertiisa ahaa ayaa fekerkaasi ka laacay isaga ayaana markaa qawaacidda u dejiyey. Isaga ayaa dhisay waxan. Waxa loo baahan yahay in culimadu si cilmi ah uga hadlaan oo la doodaan weeyi. Meeshii ay munaasib ku tahayna dhigaan. Markaa tiibaan waydiiyay qoladan oo waxa ay igu yidhaahdeen ma jiro manhaj aanu leenahay. Laakiin ninkaasi manhajkiisa ayaa u manhaj ah. Waxa aad ku garanaysaa in aanay iska baddalin manhajkaasi nin Xijaawi la yidhaa oo isna hadlayay markii ay dhawaan bayaankooda soo saareen ayaa waxa uu yidhi waxa aannu nahay jamaacada kali ah ee afartaasi sano aannu is baddal ku dhicin. Ninkaasi aan warsanayay ayaan ku idhi waar ma dad isku koban iyagu ayaa is badal samayn kara. Ilayn marka dad la isku dhaco ayaa is badal imaan karaaye ma dad isku kooban iyagii ayaa is badal samayn kara. Afartanka sano ee ay sheegayaan waa wakhtigii uu yarkaasi sameeyey fikirkan. Meelahaa Toddobaatan iyo saddexdii ama afartii meelahaa waa sida wiilku sheegay. Waxyaabaha layaab leh waxa weeyi in ay aaminsan yihiin in islaam aan iyaga ahayni aanu jirin. Waa wax uu kutub uu isagu leeyahayna ku qoray. Wakhti ay wadaadii kala baqeen oo biiqbiiqeen oo kala daateen in ay badka isa soo dhigaan waa wax wadcigu uu keenayo waaye. Laakiin markii raggu taagnaa hoosta ayay ku jireen. Afartan sano waxa hoosta galiyey rag bay ahaayeen. Niqaash kaliya ayay ahaayeen dadkiibaa la baray oo laga celiyey” ayuu yidhi Xasan Daahir Aweys guddoomiyihii hore ee xisbul islaamka Soomaaliya.
Xukuumaddi Sheekh Shariif
Xukuumaddi Xasan Sheekh